ဆန္ဒအလျောက်နှင့် involuntarily ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ယောက်ျား၏ဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်အခနှစျခုကိစ္စများတွင်သူဖြစ်ရမည်: အမှန်တကယ်ဖခင်ဤအကြောင်းကိုသံသယရှိပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူက၎င်းတို့၏ကလေးအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သူ၏ပြုစုပျိုးထောင်အတွက် (ငွေရေးကြေးရေးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု) ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်လျှင်။ သင့်လျော်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Perform နှစ်ဦးစလုံးဆန္ဒအလျောက်နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အေဂျင်စီများအားဖြင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
တန်းတူအချိုးအစားအတွက်ကလေးတစ်ဦး၏မျိုးဗီဇကုဒ် (50%) ခရိုမိုဆုမ်းသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်မိခင်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ ၏အပိုင်းအစများကို DNA ကို မျိုးရိုးဗီဇသတင်းအချက်အလက်များဆံ့ကြောင်း, loci တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇဒေတာများပါဝင်သည်။ တစ်ဦးရဲ့ DNA ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းထူထောင်ရန်သန်းပေါင်းများစွာတစ်ချဲ့အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ဏုအောက်မှာ loci စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ (- သွေး, တံတွေးမျိုးဗီဇပစ္စည်းလိုအပ်) ပထမဦးစွာကျန်ရှိနေသောဝေမျှဖေဘက်ကနမူနာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့အပြီးမိခင်ခရိုမိုဇုန်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ သူတို့တူညီလျှင်, အထီး 99.9% ဇီဝဗေဒအဖေကလေး။
မိသားစုများ၏အနာဂတ်၏ဦးခေါင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအများအပြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှိပါတယ်သောအခါ, မီးမဖွားမှီ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်) ကာလအတွင်းကျွမ်းကျင်မှုခွင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်နိုင်သလား ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း မှာမီးယပ်သားဖွားနှင့်အတူတိုင်ပင်ပြီးနောက်မိခင်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ တစ်ပေါက်စေရန်လိုအပ်သောအသီးဇီဝပစ္စည်းယူရန်။ ဒါဟာကလေး၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်းထိုးဖောက်ပြီးအလွန်အန္တရာယ်များသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်အန္တရာယ်များနည်းလမ်းဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်လည်းရှိပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောအသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အမေနဲ့စွဲချက်တင်ဖခင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မျိုးရိုးဗီဇဒေတာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ်ဇီဝအရည်များမှကလေး၏ DNA ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုထိုးဖောက်နည်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါထက်နိမ့်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်အတွက်အကြံပြုသည်။
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြဿနာသာတရားဝင်ဖြေရှင်းနေသည်။ Vivo လူကိုကိုယ်တော်တိုင်စဉ်းစားလျှင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဤအချက်ကိုတရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုများအတွက်အထောက်အထားပေးဖို့လိုတယ်:
လူမှုရေးကွန်ရက်များသို့မဟုတ် instant တမန်တို့သည်စာပေးစာယူ,
အဘအစောပိုင်းကသေလျှင်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်ခက်ခဲကလေးနှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်, တရားရုံးများအတွက်အထက်ပါအထောက်အထားများကိုယုံကြည်စိတ်ချမရှိ, လိုအပ်သောမျိုးဗီဇပစ္စည်းလူတို့သညျအဘို့အကြည့်ဖို့။ တခါတလေတောင်မှခန္ဓာကိုယ် exhume မှခွင့်ပြုချက်ရရန်ရှိသည်။ အောက်ပါနမူနာ fit:
အဘယ်သို့ငါ DNA ကိုမပါဘဲဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်နိုင်မလဲ?
မျိုးရိုးဗီဇနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဇီဝပစ္စည်းအလွန်ခက်ခဲဖြစ်ဆက်ဆံရေးသက်သေပြခြင်းငှါမဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ ထိုကဲ့သို့သော DNA ကိုမပါဘဲဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်အဖြစ်သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများ, လူသည်နှင့်တစ်ဦးကလေးသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ၏သက်သေခံချက်ကိုအကြားအပေါ်ယံအကြံအစည်၏ထောက်လှမ်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သငျသညျကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏နေ့စွဲထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အထက်ပါအထောက်အထားများကိုလူယောက်ျားသည်သူငယ်၏ဖခင်ကြောင်းမည်သည့်အာမခံချက်ပေးမထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်အဖြစ်နည်းလမ်းများ, သူအဖေပါဝင်ပတ်သက်မှုငြင်းဆိုစွပ်စွဲအထူးသဖြင့်အခါ, အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအင်အားရှိသည်။
တွဲပြီး၏အဓိကပြဿနာ - အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူတက်ခြိုးဖောကျပွီးနောကျအတူတူသားသမီးများ၏ပစ္စည်းသက်သာချောင်ချိရေးနှင့်ပညာရေးအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လူတွန့်ဆုတ်။ ဒီအခြေအနေကိုခုနှစ်တွင်မိခင်တည်ထောင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုသိသင့် ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့်ကလေးထောက်ခံမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ တခါတရံသူကငြိမ်းချမ်းစွာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်မကြာခဏအမြိုးသမီးမြားပညာရှင်များ၏အကူအညီရှာရှိသည်။
လူမည်သည်ကားကလေးသည်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်သံသယမပါဘူးဆိုရင်, ကခကျြခငျြးကလေးပြီးနောက်တရားဝငျမှတျပုံတငျဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမှတ်တမ်းတင်ပြည်နယ်အဆောက်အဦများအတွက်လုပ်ရပ်များ (စံ) လူထုအခြေပြုအဆင့်အတန်း၏ပြင်ဆင်မှုကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်များသူမပင်လျှင်, အမှန်တကယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဒေတာလုပ်နေကြတယ် တဲ့လူထုအခြေပြုပြည်ထောင်စု ကသူ၏မိခင်နှင့်အတူ။
လူသစ်ကိုမိသားစုဝင်၏ "ဖန်ဆင်းခြင်း" အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏သေချာမဖြစ်တဲ့အခါ, သငျသညျကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် (ဖြစ်နိုင်ရင်) က layout ကိုအတူ DNA ကိုနှိုင်းယှဉ်မကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစွပ်စွဲဖေ၏စာမေးပွဲများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းများ၏နမူနာများထဲမှရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
များစွာသောလူတို့သညျအမျိုးအစားကြောင့်ကလေးအထောက်အပံ့ပေးချေရန်အတွန့်ဆုတ်ဖို့ကလေးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးငြင်းပယ်ရှိပါတယ်။ တရားရုံးသွားဖို့ - အဖေ၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်စွာမျိုးဗီဇပစ္စည်းရရှိရန်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကမကယ်မလွှတ်ရင်တောင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုအဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအင်အားသုံးရပါလိမ့်မယ်။ လူတသဘောတူညီခကျြသကျသပွေမနိုင်ဘဲ, ဇီဝနမူနာသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ကလေးမွေးဖွား၏လက်မှတ် (အရာရှိတဦး) ၏အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူ;
လက်ရှိပြောဆိုချက်ကိုဖို့စာတမ်းများပြင်ဆင်နေပြီးနောက်အနီးဆုံးခရိုင်တရားရုံးကိုဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ကဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အရာစဉ်အတွင်းအစည်းအဝေးမှတာဝန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ မျိုးဗီဇကိုစမ်းသပ်မရှိဘဲစီရင်ချက်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုအထောက်အထားအခြေစိုက်စခန်းရှိလြှငျ, စမ်းသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမပေးပါ။ အထောက်အထား, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်တဲ့အခါ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ. တရားရုံးတဦးတည်းပါတီများ၏မျက်နှာသာအတွက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေသည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပုပ်ရဟန်းမင်း၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကလေးကကာကွယ်ပေးသည်ရှိရာတစ်ဦးကအခွအေနေ - ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဇီဝဖခင်မသက်ဆိုင်သူမ၏ဆန္ဒကို၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်လိုလားပါလျှင်, ထိုသူသည်အလုပ်အမှုဆောင်အေဂျင်စီများသို့လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ တရားခွင်၏အစအဘို့အသင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်ယောက်ျားသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သက်သေအထောက်အထားပြင်ဆင်ထားရန်ကြိုတင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုလူနှင့်အတူ kinship ၏သက်သေသူငယ်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် ဖြစ်. ,
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တရားစွဲဆိုမှုများစတင်ဘို့အထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြအားလုံးအခြေအနေမပြည့်စုံခြင်းနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းထားပြီးအခါဇီဝဆက်ဆံရေးမျိုးကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဆန္ဒမရှိခြင်း, ဥပဒေရေးရာဖွဲ့စည်းပုံ၏ခိုင်လုံသောအထောက်အထားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အစည်းအဝေးအတွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်သင်တစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇစာမေးပွဲမပါဘဲဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ် DNA ကို၏ဓာတ်ခွဲခန်းနှိုင်းယှဉ်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်ရံသူမတစ်ဦးအဟောင်းတွေကလေးသည်ရှိသည်ဖို့လိုလားနေတဲ့လူနှငျ့အတူသူတို့၏အသွေးကြားဆက်ဆံရေးကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်မကြာခဏတရားရုံးတို့အားဤသို့သောအယူခံအတွက်အုပ်ထိန်းသူများသို့မဟုတ်မိဘများ၏တဦးတည်း၏အသေခံခြင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အများစုသို့မဟုတ်သားသမီးများ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိအပေါ်ဝတ်ပြုကြ၏။ ကလေးကဖခင်ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ရန်အဖြစ်နည်းလမ်းက၎င်း၏မိခင်သို့မဟုတ်အလားအလာဖခင်များအတွက်ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတူညီသည်။
မည်သို့ပင်မျက်စိကန်း plasticine ၏ minions?
ကလေးများ 6-7 နှစ်ကြာနယူးလျှောက်လွှာ
မင်းသားဝီလျံနှင့်ကိတ် Middleton ၏ကလေးများ
လူတဆွဲရန်အဆင့်5နှစ်မှကလေးတစ်ဦးကိုဆုံးမသွန်သင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နားမလည်အနုပညာ: သန်းပေါင်းများစွာရောင်းချထူးဆန်းတဲ့ပန်းချီ 13
နိမိတ်လက္ခဏာကို - WASP တစ်အသိုက်လုပ်
တစ်ဦးပါတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်း 22 ပြင်သစ်ဟင်းလျာများ
အဝတ် - ဖက်ရှင် 2014
ဆောင်းတွင်းအဘို့အ Applesauce "Softy" - တဲ့စာရွက်
Cara Delevingne ၎င်း၏ "ဖောင်း" များအတွက်ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ဦးထံမှတောင်းပန်လက်ခံရရှိ
Juicing များအတွက် grinder မှ attachment
စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ bulk ဆောင်းပါးများ